बागमती अञ्चल मोटरसाईकल दर्ता अबरोध : किन मन्त्रीपरिषद्मा रोकियो नियमावली संसोधन फाईल ? – Mission Khabar
बागमती अञ्चल मोटरसाईकल दर्ता अबरोध : किन मन्त्रीपरिषद्मा रोकियो नियमावली संसोधन फाईल ?
मिसन खबर २२ आश्विन २०७५, सोमबार ११:१९
काठमाडौं– बाग्मतीमा अञ्चलमा मोटरसाइकलको संख्या १० लाख पुगेसँगै दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ । नियमावली संसोधन नभएका कारण एकसातादेखी बाग्मती अञ्चलमा नयाँ मोटरसाईकल दर्ता हुन नसकेका हुन् ।
यातायात व्यवस्था नियमावलीमा दुई अंकको नम्बर राखेर मात्रै नयाँ मोटरसाइकल दर्ता गर्न मिल्ने ब्यवस्था छ । बागमती अञ्चलमा बा ९९ प मा ९ हजार ९ सय ९९ सम्म मोटरसाइकल दर्ता भइसकेका छन् । अव १०० को लटमा मोटरसाइकल दर्ता गनुपर्ने हुन्छ । तर तीन अंकको लट बाढ्ने अधिकार विभागलाई छैन । यता, यातायात कार्यालय कानुनी अड्चन फुकाउन दुई महिनाअघि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई जानकारी गराएको बताउँछ । तर मन्त्रालय र विभागको बेवास्ताका अहिले यातायात कार्यालयमा नयाँ मोटरसाईकल दर्ता रोकिएको छ । ३ अंकको लट नम्बर राख्ने प्रस्ताव सहित विभागले पत्राचार गरेको यति लामो समय वित्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।
दसै तिहार र छठ नजिकिएसँगै दर्ता प्रक्रिया रोकिएपछि किन्ने मात्र होइन बेच्ने ब्यवसायी पनि मारमा परेका छन् । चाढपर्वको नाममा उपहार योजना र छुट दिइरहेका व्यवसायी ग्राहक नपाउँदा चिनितत छन् । यातायात व्यवस्था विभाग पनि यातायात व्यवस्थापन नियमावली संशोधनकालागि भदौ १७ गते नै प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको बताइरहेको छ । तर आइतवार बसेको मन्त्रीपरिषद्बाट पनि यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन । एकसाता रोकिएको दर्ता खुलाउन अझै कति समय लाग्छ, यसमा विभाग आफै पनि अलमल छ ।
नयाँ मोटरसाइकलको दर्ता रोकिदा क्रेता र बिक्रेतासँगै राज्यको राजश्वमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । समस्याको पूर्व आँकलन गरेर निवारण खोज्नेभन्दा पनि समस्या आएपछि चनाखो बनेजस्तो गर्ने हाम्रो सोच र काम गराई बदल्न आवश्यक छ ।